PressReader - Isolezwe: 2017-10-12 - Usindise usana obulawe wudonga
Usindise usana obulawe wudonga
Isolezwe - 2017-10-12 - IZINDABA - ZANELE MTHETHWA noPHILI MJOLI
KUSHONE elayizolo imibiko iveza ukuthi bangu-11 abantu abashone ngesikhathi kunezikhukhula KwaZulu-Natal.
Okhulumela amaphoyisa KwaZuluNatal, uLiet-Colonel Thulani Zwane, uthe bayisihlanu abantu okusolwa ukuthi bamukile abebesafunwa. Uthe amaphoyisa nethimba lezinhlekelele benza konke ukufuna abasanyamalele.
Kwabashonile kukhona noNksz Sizakele Chala (29) odilikelwe wudonga esibhedlela iPrince Mshiyeni Memorial ngesikhathi ehambise usana lwakhe olunesonto luyohlolwa inkaba.
Kuvele ukuthi uncamele ukusindisa usana lwakhe ngesikhathi ebona ingozi eluphonsa komunye umuntu yena wadilikelwa wudonga washona.
EMshiyeni kushone ababili kwalimala ababili.
Unina omncane kaSizakele omncane, uNkk Ntombikayise Dube (50), uthe umufi uhambe ngemuva kuka-7 ekuseni wathi uzosale esebhalisa nesitifiketi sengane sokuzalwa.
“Sikhathazekile ngesikhathi kuqala imvula enamandla engakabuyi. Angikutholanga ukuphumula ngibona kuhamba isikhathi engabuyi engasatholakali nasocingweni. Ngithumele uyise wengane yakhe wayobheka esibhedlela sathola ucingo lokuthi uSizakele ushone kudilika udonga,” kusho uNkk Dube.
Uthe umufi ukhombise ubuqhawe ephonsa usana komunye obeseduze kwakhe ngesikhathi kudilika udonga. Kuthiwa usana lusele esibhedlela njengoba besahlola ukuthi alulimalanga yini.
“Siyile ukuyobona ingane esibhedlela nesidumbu sikaSizakele. Akalimalanga emzimbeni futhi akophanga. Sesizohlala nomndeni sibonisane ngokuthi usana luzohlala nobani,” kusho uNkk Dube.
Isolezwe lifike kusalindwe unina kamufi okuthiwa useZinqoleni, ePort Shepstone lapho kuzongcwatshwa khona.
Umufi ushiye indodana eneminyaka eyisishiyagalolunye kanti ubesanda kuphothula izifundo zeHome Based Care. Kwesinye isehlakalo kushone umfundi oneminyaka engu-14 omuke ebhulohweni ebeligcwele amanzi. UNomthandazo Chili obefunda uGrade 9 eNdaye High eFolweni kuthiwa ubehamba nabanye abafundi ngesikhathi emuka namanzi ebhulohweni abebehamba kulo.
Kushone nowesifazane okuthiwa ubengumsebenzi wakwaMasipala weTheku obehlanza amathoyilethi emgwaqweni uRussel. Kuthiwa uwelwe wudonga wacindezeleka washona.
UNksz Sthabile Ngema nendodana yakhe eneminyaka emibili bashone ngesikhathi kumuka umjondolo wesoka lakhe abebelivakashele ngakwaJeena, eSiphingo.
UNksz Ngema ohlala eTshelimnyama kuthiwa bekumele ahambe ngoLwesibili kodwa wabona izulu lilibi wahlala kanti umjondolo kayise wengane yakhe uzokhukhulwa ngamanzi bephakathi.
UNkk Nobesuthu Mbuthu uthe uNksz Ngema ubaleke wangena emjondolo ngesikhathi ebona umjondolo wesoka lakhe ugcwala amanzi bavala kodwa babona amanzi esengaphakathi.
“Ngaleso sikhathi ingane ibiphethwe yimina. Kuthe sekusuka ihlangothi lwesibili, kwakhukhuleka umbhede ebengihleli kuwo wathi angimnike ingane. Angazi ukuthi kwenzekeni nami ngiphushwe ngamanzi ngayophonseka ethoyilethi. Umbhede ebengihleli kuwo angazi ukuthi umuke nini. Amanzi angiphushele ethoyilethi, ngabambeka phakathi kwethoyilethi ne-wardrobe. Ngithe uma ngiphakamisa amehlo ngambona ekhukhuleka eyoshona emhosheni, engasayiphethe ingane,” kusho uNksz Mbuthu.
Isidumbu sikaNksz Ngema nesengane zitholakale ngokwehlukana emhosheni, ngoLwesibili ntambama.
Umndeni wakwaMaphumulo eSiphingo izolo ubusathungatha uNkk Nompumelelo Maphumulo olahleke nezingane zakhe ezimbili okusolwa ukuthi umuke nomfula ophambi komuzi wakhe.
Abantu abangu-314 abakhahlanyezwe yizikhukhula eMega Village eLamontville bakhoseliswe ehholo eTehuis kanti sekunezinhlangano ezibanikelela ngokudla nezingubo zokulala.
KUSUKE uphahla esibhedlela iKing Edward ngesikhathi kuhlasele isiphepho ngoLwesibili eThekwini
UCHAZWE njengeqhawe uNksz Sizakele Chala ophonsele omunye usana lwakhe olunesonto lwasinda, yena wadilikelwa udonga washona esibhedlela ePrince Mshiyeni Memorial